निरिह उपभोक्ता, सरकार असफल: निजि क्षेत्र सफल ! | सिमान्तMarginal निरिह उपभोक्ता, सरकार असफल: निजि क्षेत्र सफल ! – सिमान्तMarginal
बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवाद कांग्रेसी नेताका व्यवहारमा देखिँदैन नि ? भन्ने प्रश्नमा डा कोइराला भन्छन- ”यो एकदम ठीक हो । अक्सफाम भन्ने संस्थाको तथ्यांकअनुसार एक प्रतिशत जनसंख्यासँग विश्वको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति छ । ६५ जनाको (खासमा त ६२ जना हो) सम्पत्ति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो गरिब र धनीबीचको खाडल किन बढ्यो ? बीपीले प्रतिपादन गरेको समाजवाद आजको वास्तविकता हो । यो अझै पुरानो भएको छैन । वास्तविक समाजवाद अँगाल्न हामी चुकेका छौँ । बीपीले प्रतिपादन गरेको समाजवाद भनेको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिने गरी हुने सुधार नै हो । महाधिवेशनमा यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।”
तर यता उद्ध्योगपति बिनोद चौधरिले भनेका छन- ”डा. महतलाई उहाँको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री नितीकै कारण मैले सम्मान गर्ने गरेको छु । सरकारले चलाएका संस्थानहरुको दुर्दिन देखिँदै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम डामाडोल अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल टेलिकम पनि अब उँधोगतिमा हिड्ने कुरामा दुईमत छैन् । डा. महतलाई उहाँको उदार र निजी क्षेत्र मैत्री नितीकै कारण मैले सम्मान गर्ने गरेको छु ।”
Previous Postस्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति पनि छिट्टै घोषणाNext Postचौथो अौध्योगिक क्रान्ति: मानिसको अस्तित्व नै संकटमा !